NATIIJADA KOOXAHA GUUD - Meel aad u xun oo loogu talagalay ALLAHS of Arts Arts Martials - Qaybta 2 - Dhulka Quduuska ah ee Daraasadaha Vietnam
Maalmahan, markaan fiirineyno liiska hoggaamiyeyaasha millatariga ee lagu caabudi jiray macbudka fanka dagaalka, waxaan la yaabanahay inaan aragno in Wasaaradda Rites ay duubtay tixraacyadooda oo aan ka imaanin macbudka fanka dagaalka intii lagu gudajiray. Le [Lê] Boqortooyo laakiin ka timid Macbadka farshaxanka ee Shiinaha. Waxaa jiray toban jeneraal oo loo yaqaan “Thap triet phoi huong"[Thập triết phối hưởng] ka Duong [.Ng] Dawladnimo, ay ka mid yihiin Thai Cong [Thái Công], Truong Luong [Trương Lương], Dien Nhuong Thu [Iền Nhượng Thư], Ton Vo Tu [Tôn Võ Tử], Ngo Khoi [Ngô Khởi], Nhac Nghi [Nhạc Nghi], Han Tin [Hàn Tín], Gia Cat Luong [Gia Cát Lượng], Ly Tinh [Lý Tĩnh], Ly Tich [Lý Tygach].
Si kastaba ha noqotee, labada Jeneraal Bach Khoi [Bạch Khởi] iyo Ngo Khoi [Ngô Khởi] ayaa laga saaray liiska afar kale ayaa lagu daray: Quan Trong [Quản Trɔng], Quach Tu Nghi [Quách Tử Nghi], Ly Thanh [Lý Thanh], iyo Pham Lai [Phạm Lãi].
Isku soo wada duuboo, waxaa jiray laba iyo toban xayndaab oo ay caabudaan Vietnam iyo Shiinaha.
Wasaaradda Rites ayaa fiiro gaar ah siisay Thai Cong [Thái Công], Khuong Thai Cong [Khương Thái Công] (Le [Lê] Dynasty waxay soo guurisay halyeeyga Shiinaha). Intaa waxaa sii dheer, Mandarins-ka la caabudo waa inay ahaayen hoggaamiyeyaal millateri oo caan ah tan iyo xilligii boqortooyadii Xuan Thu oo iyagu xerta ka ahaa Thai Cong [Thái Công].
Waxaa la ogsoon yahay in Macbadka fanka dagaal ee Shiinaha, inay jireen afar qof oo u qalma magacyada: Ton Vo Tu [Tôn Võ Tử], Dien Nhuong Thu [Điền Nhượng Thư], Quan Trong [Quản Trɔng], Ly Tinh [Lý Tĩnh]. Sidoo kale, waxaa jiray shan kale oo leh xirfad milatari oo aad u wanaagsan: Truong Luong [Trương Lương], Han Tin [Hàn Tín], Gia Cat Luong [Gia Cát Lượng], Quach Tu Nghi [Quách Tử Nghi], Ly Thanh [Lý Thanh]. Intaa waxaa dheer, liiska macbudka fanka legdinta, waxaa jiray saddex jeneraal caan ah: Nhac Phi [Nhạc Phi], Luu Co [Lưu Cơ], iyo Vuong Thu Nhan [Vương Thủ Nhân].
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Rites, Pham Lai [Phạm Lãi] uma qalmin cibaadada; Nhac Nghi [Nhạc Nghi] ma uusan dhamaysan shaqadiisii ​​fanka dagaalka; Ly Tich [Lý Tích] wuxuu caayay “addoomo”; Bach Khoi [Bạch Khởi] waxaa lagu eedeeyay "dilidda kuwii guuleystey." Ngo Khoi [Ngô Khởi], isagoo sharaf hoose leh, wuxuu dilay xaaskiisa si uu u noqdo guud. Luu Co [Lưu Cơ] waxay lahaayeen hawlo shaki leh. Vuong Thu Nhan [Vương Thủ Nhân] lagu caabudi jiray Van Mieu [Văn Miếu] (Macbadka Qorista) horeba. Ugu dambeyntiina Amiir Minh Mang [Minh Ming] mid kale oo guud oo la ogolaaday, Tu Dat [Từ Đạt], kaas oo sameeyey liis ah kow iyo toban jeneraal oo lagu caabudo.
Wasaaradda Rites waxay ku faani jirtay liiska uu amiirka u aqbalay ruuxa: “Umaddeena, maadaama dhulkeenu balaariyay Diin, Le, Ly, Tran [Hinh, Lê, Lý, Trần] Dynasties, waxay lahayd jeneraal badan oo wanaagsan. Bilowgii illaa dhexe ee ballaarinta dhulalka, tabarucaadka raggayagu mudnaanta mudan dhammaan waa la diiwaangeliyay taariikhda ”. Si kastaba ha noqotee, liistada ayaa loo oggolaaday inay doorto jeneraal aad u fiican oo la caabudo.
Si loo dhiso Macbudka farshaxanka iyo sidoo kale Macbudka Suugaanta, the Nguyen [Nguyễn] Boqortooyadii waxay fiiro gaar ah siisay feng-shui, muuqaalka dhirta, iyo jawiga:
Macbadka Suugaanta oo lagu beeray geedo geed. Macbudka farshaxanka Martial waxaa lagu beeray geedo almond.
Laba saf oo loo yaqaan 'calophyllum' ayaa laga arki karaa labada dhinac ee Maxkamadda Sacudiga ee Dalka
Macbudkii farshaxanka dagaalku wuxuu ku wareegsanaa qalcad dhismeedka oo leh masaafo ku dhow 400 mitir. Dhismaha waxaa ku jiray hal macbad oo weyn oo leh naqshad gaar ah. Aagga ugu weyni wuxuu ka koobnaa saddex qaybood iyo laba sagxadood. Aagga hore wuxuu ka koobnaa shan qaybood. Horta waxaa ku yiil guriga bidix iyo guriga midigta oo midba midka kale hor yaal. Macbudka dibedda waxaa laga dhisay a Te sinh sidaas [Tể sinh sở], meel lagu gawraco xoolaha lagu gowraco.
1: Macbadka Ilaah iyo Farshaxanka, oo badanaa loo yaqaan Macbadka Ilaah ama Macbadka Fanka.
2: Isha: vi.wikipedia.org/wiki/Vo mieu Hue
Sawir - xigasho: wikipedia.org
◊ LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 1
◊ LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 2
◊ LUUQADAHA HADALKA iyo ARRIMAHA GUUD EE VIETNAM - Qaybta 3
(Booqday jeer 802, booqashooyinka 1 maanta)
Views Views: 1,970
← NATIIJADA ARRIMAHA GUUD - Meel aad u xun oo loogu talagalay ALLAHS of Arts Arts Martials - Qaybta 1
Ku celcelinta VIETNAMESE XUQUUQDA AADANKA, Waa nooc Ficil jir ahaaneed →
Comments Off on TAARIIKH kooban oo ah QORAALKA VIETNAMESE - Qaybta 3
Comments Off Bulshada MANG oo ka kooban 54 qowmiyadood oo Vietnam ah
Comments Off on the MUGU Community of 54 kooxaha qowmiyadeed ee Vietnam